प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिमण्डल तत्काल पुर्नगठन हुँदैन : मुख्यमन्त्री राउत | रुपान्तरण
२०७७ मंसिर ११, बिहिबार
भेन्टिलेटरमा ओली सरकार
शेयर बजार: एकै दिन सात अर्बको कारोबार
वाणिज्य महासंघमा चुनावी रौनक: सौरभ ज्योतिको टीममा को को ?
पार्टी कुनैपनि हालतमा फुट्दैन
प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिमण्डल तत्काल पुर्नगठन हुँदैन : मुख्यमन्त्री राउत
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार १७:४१
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २ नम्बर प्रदेशका बाढी र डुवानबाट प्रभावितहरुलाई अझै राहत तथा पुनःस्थापना नभएको गुनासो गरेका छन ।
उनले भने, ‘२ नम्बर प्रदेश बाढी र डुवानबाट प्रभावित बनेको छ । आठवटै जिल्ला प्रभावित बनेका छन् । अझैपनि राहत पुगेको छैन् ।’
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ सरकारले आफ्नो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म तुरुन्तै राहत पुर्‍याएको सुनाए ।
अहिले पनि प्रदेश सरकार प्रभावित जिल्लामा पुगेर राहत पुर्‍याउने काममा लागिरहेको राउतले सुनाए । उनले भने, ‘अहिलेपनि राहत वितरण गर्न धेरै बाँकी छ । कतिलाई राहत पुग्यो, कतिलाई पुग्यो भनेर हेर्नको लागि हामीसँग संयन्त्र छैन् । तर राहत धेरैलाई पुगेको छैन् ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालले आफ्नो तर्फबाट बनाउनुपर्ने तटबन्ध लगायतका कामहरु नगरेको कारण बाढी तथा डुवानको समस्या आएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोगको आश्वासन दिएको उनले सुनाए ।
भर्खरै एक करोड २७ लाख बराबरको खाद्यान्न आफ्नै उपस्थितिमा रौतहटमा वितरण गरिएकोपनिउनले जानकारी गराए । अन्य जिल्लामा पनि खाद्यान्न वितरणको काम भैरहेको राउतले जनाए ।
आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तापनि तटबन्धहरुको म्यापिङको लागि आग्रह गरेको सुनाए । त्यस्तै उनले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरे ।
मुख्यमन्त्री राउतले अहिले २ नम्बर प्रदेशका अधिकांश पुल र रोडहरु समाप्त भएको सुनाए । उनले संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार सबै निकाय चल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘संघले नीति तथा नियम निर्माण गर्ने र निर्देशन दिने हो । सबै निकाय अब नयाँ प्रणालीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेपनि २, ३ मन्त्रालयमा सचिव अनुपस्थित छन् ।’
फरक प्रसंगमा उनले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यो सरकार पाँच वर्षसम्मको लागि हो, यसको अहिले कुनै विकल्प छैन् । तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदैन् ।’
बरु अब सरकारले काम गर्ने शैली बदल्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘पहिलो वर्ष हामीले अनुभव हाँसिल गरेका छौं । अब अर्को वर्ष हामी राम्रो काम गर्छौं । हामी बडो ईमानदारिताका साथ काम गर्छौं ।’
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १७:०३
‘समृद्धि नचाहने तत्व सरकारविरुद्ध खनिएका छन्’
८ मंसिर २०७७, सोमबार १९:४७
ओलीलाई कांग्रेस सांसदको टाउको नगन्न सुझाव
७ मंसिर २०७७, आईतवार २०:०५
६ मंसिर २०७७, शनिबार १६:०३
आफन्तलाई नियुक्ति दिन मन्त्रीको फास्ट ट्रयाक !
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:२९